ARETI-MIFINDRA AMIN’NY ZAZA ANY AM-BOHOKA | 102 KARA
ARETI-MIFINDRA AMIN’NY ZAZA ANY AM-BOHOKA
Marina io araka ny famakafakana nataon’ny manam-pahaizana ara-pitsaboana sy ny zava-mitranga ankehitriny.
Ny ARETI-MASO no tiana ho lazaina eto.
Tato ho ato dia tsikaritrao angamba fa betsaka ny olona voan’ny areti-maso ary raha ny fisehon’izany dia :
1°- mivonto ny maso ary miha-mena be ihany koa.
2°- mamoaka tai-maso be mihintsy ary ny maraina vao mifoha dia mila tsy hihiratra ny maso fa madity be.
3°- mitombo ny fanaintainana
Ny voalaza fa mahatonga ilay areti-maso kosa dia :
1°- ny fahalotoan’ny rivotra iainana ka mivantana avy hatrany any anaty maso.
2°- ny taratry ny masoandro be loatra
3°- ny TSY FAHAMPIAN’NY SAKAFO manome aina ny maso.
Koa raha tsy metimety ny masonao dia ny manatona TOBIM-PAHASALAMANA na dokotera no METY indrindra . Tsy azo atao mihintsy ny manao dokotera tena satria mety vao maika mampihombo ny aretina izany : ny toetoetran’ny mason’ny tsirairay avy ihany koa dia tsy mitovy velively.
Fa ny tena mampanahy ihany koa dia MIFINDRA ity aretina mahazo ny maso ity, ka raha tsy voatsabo tsara sy haingana dia mifindra amin’ny zaza any am-bohoka, raha vao tsy teraka akory aza izany izy..(Fanambaran’ny mpikaroka sy manam-pahaizana izany ) ka ilaina ny fitandreman’ny rehetra satria aleo MISOROKA toa izany MITSABO hoy ny teny hendry fandrentsika matetika..
14 juin 2013 - 19 h 25 min Social 942 vues